ElaseMelika ethubeni lokuqopha omunye umlando - Bayede News
Amahloni kuthinteka neNingizimu Afrika kwelomkhonyovu we-FIFA
NGONYAKA ka-2008 abavoti baseMelika baqopha umlando okhethweni. Okokuqala ngqa izinkumbi zabantu bazo zonke izinhlanga zaqoka ukuthi leli lizwe elibalwa namanye amakhulu emhlabeni libe noMengameli woHlanga.
Ngenxa yomlando walo wokucindezelwa kwaboHlanga ababefike eMelika njengezigqila lokhu kwaphetha, kwaqala ikhasi lelisha emlandweni. UMengameli wokuqala omnyama okunguMnu Barack Obama waqokwa ngabavoti abayi-69,498,516 (okwakungamaphesenti angama-52 ekhulwini). Ukunqoba kwakhe kwananelwa cishe wumhlaba wonke ngoba kwakunethemba lokuthi uza nezinguquko kulandela umkhankaso wakhe owawukhuluma ngoguquko.
Esikhathini esiyiminyaka emibili iMelika izophinde ithole elinye ithuba lokwenza umlando. Kulokhu kulindeleke ukuba abavoti bakhona bakhethe ukuthi sebekulungele yini ukuphathwa ngumholi wesifazane. Lokhu kuyobe kungokwesibili kuba noshintsho olunqala ngoba ngonyaka ka-2008 bakhetha ukuthi sebekulungele ukuphathwa ngumholi omnyama bangamkhetha owesifazane naye owayencintisana noMnu Obama okwakunguNkk Hillary Clinton.
Kulokhu uNkk Clinton nogane loyo owayenguMengameli waleliya lizwe uMnu Bill Clinton ubukeka enokuzethemba ukuthi sekuyisikhathi sakhe ngoba okwamanje akekho enhlanganweni yakhe, ama-Democrats osaphakamise isandla. Ukuvuma kukaNkk Clinton ukungenela ukhetho kube ngesikhathi esimqoka lapho ama-Republican okuyizimbangi zama-Democrats zinamandla amakhulu kwisiShayamthetho saseMelika. Isimo sibi ngangokuthi uma ama-Republican ethatha isinqumo sokumisa umthetho othize lokho kuyenzeka nokuphoqa ukuthi uMengameli asebenzise amandla akhe ukuze loyo mthetho uphasiswe.
Amandla ama-Republican kwisiShayamthetho abonakale ngesikhathi emema loyo onguNdunankulu wakwa-Israel, u-Benjamin Netanyahu ukuba azokhuluma nokuyinto eyabonakala njengokweseka umholi wangaphandle kunokweseka uMengameli wezwe laseMelika ngoba wonke umuntu wayazi ukuthi u-Obama noNetanyahu kababoni ngasolinye kakhulukazi odabeni lwase Iran.
Yize kuvame ukuthi nxa kukhulunywa ngoNkk Clinton bese kufakwa igama lo mnyeni wakhe, iqiniso lithi naye ungusopolitiki onamava. Uke waba nguSigele (Senator) omele indawo yase-New York waphinda futhi ngaphansi kukahulumeni kaMengameli u-Obama waba nguNobhala weziNdaba zamaZwe angaphandle (Secretary of States). Njengabo bonke osopolitiki naye unawo amabatha akhe nokuyinto izimbangi zakhe nakanjani ezizohlala kuwo. Babili abantu okumele baphendule embuzweni wokuthi i-Melika isikulungele yini ukuphathwa ngowesifazane. Abokuqala yinhlangano yakhe ama-Democrats okumele amqoke futhi ameseke. Abesibili wumphakathi waseMelika okwaziwayo ukuthi iningi lawo lingontamo lukhuni uma kukhulunywa ngoguquko.
Ukhetho lwaseMelika luka-Mengameli luzoba ngo-2016.
nguMfo waKwaNomajalimane May 27, 2015